Ruka 2 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible SCLB] - (Ruk 2)
Namazuva iwayo kwakatemwa chirevo chakabva kuna Siza Agusuto, chokuti vanhu vapasi pose vanyorwe mazita avo.
Uku ndiko kwaiva kunyorwa kwamazita kwokutanga kwakaitwa Kwiriniosi ari mutongi weSiria.
Vanhu vose vakaenda kundonyorwa mumwe nomumwe kuguta rokwake.
Zvino Josefi akabvawo Garirea muguta reNazareti achikwira kuJudhea kuguta raDhavhidhi rinonzi Bheterehemu, nokuti aiva wemba nowedzinza raDhavhidhi.
Akaenda kundonyorwa iye naMaria waakanga achangobva mukuroora, akangawo ava napamuviri.
Vachiri ikoko, mazuva ake okuti asununguke akakwana.
Akasununguka dangwe rake, romwana mukomana waakaputira namachira ndokumuradzika muchidyiro chezvipfuwo, nokuti vakanga vashaya nzvimbo muimba yavaeni.
Mudunhu iroro makanga muina vafudzi kumafuro vairindira zvipfuwo zvavo usiku.
Nokuti nhasi uno, muguta raDhavhidhi, mazvarirwa Muponesi, ndiye Kristu Tenzi.
Chiratidzo chamuchamuziva nacho ndechichi chokuti muchandowana mucheche akaputirwa namachira akaradzikwa muchidyiro chezvipfuwo.”
Pakarepo boka guru rehondo yedenga rakamira pamwe nomutumwa vachirumbidza Mwari vachiti,
Kuzoti vatumwa vaye vabva pavari, vachienda kudenga, vafudzi vakataurirana vachiti, “Handei kuBheterehemu tindoona zvaitika izvi zvataziviswa naTenzi.”
Vakaenda vachikurumidza vakasvikowana Maria naJosefi, uyezve mucheche arere muchidyiro chezvipfuwo.
Kuzoti vafudzi vaona mwana vakatanga kurondedzera zvavakanga vataurirwa nezvemwana uyu.
Vose vakanzwa izvi vakashamiswa kwazvo nezvavakataurirwa navafudzi.
Asi Maria akapfundira zvinhu zvose izvi mumwoyo make achinyatsozvifungisisa.
Vafudzi vakadzokera vachikudza nokurumbidza Mwari pamusoro pazvose zvavakanga vanzwa nezvavakaona sokuudzwa kwavakaitwa.
Mushure memazuva masere, pakadzingiswa mwana, akatumidzwa zita rokuti Jesu, ndiro zita riya raakapiwa nomutumwa, amai vake vasati vava napamuviri pake.
Kuzoti nguva yokuchenurwa kwavo yakwana, vakakwira nomwana kuJerusaremu kundomusuma kuna Tenzi sezvaidikanwa nomutemo waMosesi.
Sezvazvakanyorwa muMutemo waTenzi kuti, “Dangwe rose rechikomana rinotanga kubuda mudumbu raamai varo richanzi rakaturirwa Tenzi.”
Vakaendawo kundopira mupiro wechibayiro chenjiva mbiri kana hangaiwa mbiri diki sokurehwa kwazvakaitwa nomutemo waTenzi.
akatora mwana akamubata mumaoko, akarumbidza Mwari achiti;
nokuti meso angu aona ruponeso rwenyu,
rwamakagadzirira kuti ruonekwe nendudzi dzose dzavanhu.
Mwenje wokuvhenekera vechirudzi nomukurumbira wavanhu venyu vaIsiraeri.”
Baba vake naamai vake vakashamiswa vachinzwa zvakataurwa nezvake.
Zvino Simeoni akavakomborera ndokuti kuna Maria amai vake, “Chinzwai, mwana uyu akasarudzirwa kuputsika nokumuka kwavazhinji muIsiraeri nokuvazve chiratidzo chichapikiswa.”
Chichaita kuti pfungwa dziri mumwoyo yavazhinji dzizivikanwe. Nemiwo mwoyo wenyu uchabaiwa nebakatwa.
Kwaivawo nomumwe muporofitakadzi ainzi Ana, mwanasikana waFanuero, wedzinza raAsheri. Iye akanga atokwegura. Akangogara nomurume wake kwamakore manomwe chete kubvira umhandara hwake,
ndokuzogara sechirikadzi kusvikira ava namakore makumi masere ana mana. Haaisiyana neTemberi, maaishandira Mwari siku nesikati, nokutsanya nokunamata.
Akauyawo nenguva yakareyo akatenda Mwari ndokutaura nezvomwana uyu kuna vose vaimirira kununurwa kweJerusaremu.
Zvino kuzoti vapedza kuita zvose zvaidiwa noMutemo waTenzi vakadzokera Garirea kuguta ravo reNazareti.
Mwana uyu akakura akasimba, akazara noungwaru, nechikomborero chaMwari chaive chiri paari.
Gore negore vabereki vake vaienda kuJerusaremu kumazuva makuru ePasika.
Kuzoti Jesu ava namakore gumi namaviri, vakakwirako samaitiro avo.
Zvino kuzoti mazuva makuru ePasika apera, vodzokera kumusha, mukomana Jesu akasara kuJerusaremu. Vabereki vake havana kuzviziva.
Vakafamba rwendo rwomuswere wezuva vachifunga kuti ari mukati mavamwe vavaifamba navo. Vakazomutsvaga mukati mehama neshamwari dzavo.
Zvavakamushaya vakadzokera Jerusaremu vachimutsvaka.
Nezuva rechitatu vakazomuwana ari muTemberi agere pakati pavadzidzisi achiteerera zvavaitaura achivabvunzawo mibvunzo.
Vose vakamunzwa vakashamiswa nokunzwisisa kwake nemhinduro dzake.
Vabereki vake, pavakamuona vakashamiswa kwazvo. Ipapo amai vake vakati, “Nhai mwanangu, wakaitireiko zvinhu zvakadai kwatiri? Tarisa uone Baba vako neni takatambudzika kwazvo tichikutsvaka.”
Iye akavapindura achiti, “Chakaita kuti munditsvake kumwe kwese chii? Makanga musingazive here kuti ndinofanira kuva muimba yaBaba vangu?”
Asi ivo havana kunzwisisa zvaakavataurira.
Akadzika navo akasvika kuNazareti, kwaakagara navo achivateerera. Amai vake vakapfundira zvinhu zvose izvi mumwoyo mavo.
Zvino Jesu akakura muungwaru, nomumhu wake, nomukudiwa naMwari navanhu.